IJean ekrazulweyo Amehlo aMthubi okwenene SY Aurelia 165CM Unodoli wothando
Ibhanti: Unodoli weSY
Umbala womlomo: *
Imbali yemvelaphi ka-Aurelia:
I-Aurelia iyidoli yesondo ye-TPE enobude be-165cm. Oku ngokwenene kuye kwabangela ukuba abaninzi abenzi boonodoli baqalise iindidi zoonodoli ngamaxabiso afanelekileyo. Izinto zokudlala zabantu abadala kufuneka zikhethelwe nayiphi na injongo - ukhetho olulodwa lwenyani Iidola zoThando uqinisekile ukuba uyazanelisa iimfuno zakho zesini. Zahamba iintsuku apho abantu babenokhetho olulinganiselweyo lokuhlola ilizwe lezesondo. Nangona kunjalo, oonodoli banamhlanje bavumela amadoda ukuba aphile ngeengcinga zawo zesini kwaye afudumeze ubomi besondo obukruqulayo ngeyona ndlela ilungileyo.
❤ Ibhokisi ekhethekileyo yokugcina kunye nokuthutha oonodoli besondo. Abanye abakwazi ukuyibona njengonodoli ovela ngaphandle - ukukhusela ubumfihlo bakho
Iinkcukacha zeMveliso yoonodoli ngesondo:
Ukuphakama: 165cm isifuba esincinci
Ubunzima bentlawulo: 44kg
Ngaphantsi kwe-bust: 65cm
Ububanzi bamagxa: 34cm
Ingalo ubude: 55cm
Ubude besandla: 15cm
Ubude bomlenze: 89cm
Ubude beenyawo: 19cm
Ubungakanani bengalo: 22cm
Ububanzi bethanga: 48cm
Ukujikeleziswa kwethole: 29cm
Umgca wentamo: 28cm
Ubunzulu bomlomo: 13cm
Ubunzulu belungu lobufazi: 18cm
Ubunzulu be-Anal: 17cm
Imilinganiselo yephakheji: 155 * 42 * 33cm
Lorelai Pink labia Lifelike Sex Dolls Amehlo acacileyo TPE 165CM Red H ...
Ibali lemvelaphi kaLorelai: U-Lorelai ngudoli wesondo we-TPE kunye nobude be-165cm. Kwaye ukuba le "doli yangempela" ayifuni ukusebenzisa le doll ngenye imini, inokusetyenziswa njengento yokuxabisa ekhaya, kwaye ingaba nayo. igqithiselwe kwaye inikwe njengesipho esidibeneyo. Kubonakala ngathi ifanele ukuba nesiphelo esihle. Mna...
UEmely Omtsha weReal unodoli weTan umbala wengqolowa we-TPE 152CM iinwele eziBrown E-Cup w ...
Ibali lemvelaphi ye-Emely: U-Emely unodoli wesondo we-TPE kunye nobude be-152cm. Zihlala ixesha elingakanani iidoli zesini? Oonodoli bokwabelana ngesondo banokusetyenziswa ixesha elide, ukuba nje bengenarhabaxa kwaye bengakhathalelwa, akukho nto iphosakeleyo ngokuyisebenzisa iminyaka emi-3-5. oonodoli bezesondo abancinci benziwa ngesilicone ...
U-Elaine weNdalo yendalo yonke yolusu unodoli wenyani iimpundu ezi-Sexy 159CM ezimfutshane ...
Ibali lemvelaphi ka-Elaine: U-Elaine ngunodoli wesondo we-TPE nobude be-159cm. Ke ulonwabo kunye nolonwabo olufumana koonodoli bezesondo abafikelelekayo bayanda. Ukwabelana ngesondo okucocekileyo kunye nokucoceka kuhlala kwamkelekile. Ukuba uzisebenzisa ngesondo, ungalibali ukucoca unodoli wakho wothando emva kokusetyenziswa ngakunye. Oku kuya kunceda ukwakha i-rel ehlala ihleli ...
U-Emmy Lorraine wendalo oonodoli beSini abaNxibe ngexabiso eliphantsi iyunifomu yesikolo yaseAsia 163cm ...
Imbali yemvelaphi kaEmmy: U-Emmy ngunodoli wesondo we-TPE kunye nobude be-163cm / 5ft3. Ukuba uzithenga kumboneleli othembekileyo, unokugcina ubomi bakho bobulili kunye nobomi obunempilo ngokuvisisana. Aba nodoli bothando banokusetyenziswa ngamadoda kunye nabasetyhini ukuhlangabezana neemfuno zabo ezingaqhelekanga. Kukho iintlobo ezahlukeneyo zoonodoli besondo s ...
Oonodoli bezesondo baka-Amber abaMhlophe beNwele bayathengiswa Amehlo aBlue 151CM Iqhosha lelebhu ...
Imbali ka-Amber: I-Amber ngunodoli wesini we-TPE ubude be-151cm. "Ewe, mfake emlonyeni kwaye wonwabe" uGeorge wandikhuthaza. Emva kwexesha wacebisa, "Kuthekani ngesonka sokwenyani?" Ewe ndavuma, ndakhupha i-dick yam kwaye ndaqalisa uncedo ...
U-Kylee Brown Iinwele Ezinde Eziphotheneyo Ngakumbi Oonodoli Bezesondo Abamnyama Imilebe Ebomvu TPE 16 ...
Ibali lemvelaphi kaKylee: U-Kylee ngunodoli wezocansi we-TPE kunye nobude be-166cm. Sivuyiswe ukubona ukuba zininzi kangakanani iidoli zothando ezitsha. Sithanda kakhulu oonodoli bothando kunye noonodoli abamangalisayo bezesondo. Isinxibo sakhe esihle sitsala amehlo kakhulu kuzo zonke iicarnivals. Nangona kunjalo, iiDoli zothando ezisondele ebomini zinokunxiba malunga ...
Nola Black iinwele Uthando Doll Pink imilebe TPE 160CM labia yamanzi B-Cup
Ibali lemvelaphi kaNola: I-Nola iyidoli yesondo ye-TPE enobude be-160cm. Ngokucacileyo bebengayazi indlela yokubuxabisa ubuhle boonodoli bokwenyani, basuka baphuma enqwelweni begigitheka baza bagqabaza ngoonodoli bothando. Ngeli xesha, umzimba wonodoli wesondo u-Bai Mei ufana neqanda eligobileyo. Intle...
Myra Body iinkcukacha Unodoli Okwenyani iimpundu TPE 161cm | 5ft3 P ...
Imbali yemvelaphi kaMyra: UMira ngunodoli wesondo we-TPE nobude be-161cm.I-Doll yothando ijijekile phambi kwabantwana okwethutyana, yaza yagoba yaza yasondela kubo, njengokungathi ibancede baphulule amalungu esini. Thixo wam, unodoli wam wokwenyani onentliziyo ebandayo angathabatha inyathelo lokuqala lokunceda abantu baphulule amaphambili... Ingaba ndiyiholo ...
Umzimba we-Elliot wokwenyani othanda unodoli weGem Green Blue Eyes TPE 158CM esulungekisiweyo ...
Imbali yemvelaphi ye-Elliot: U-Elliot ngudoli we-TPE wesondo kunye nobude be-158cm. Nangona kunjalo, isiganeko esandothusayo senzeke. Unodoli wesini okunene wabonakala eva isoyikiso esinzulu. Yaguqa phantsi nokuba imdaka, yaguqa ngamadolo yaphakamisa isinqe sayo ukuba ibambe umhlaba ngentloko yayo, yagoba phantsi...
UCecelia Blonde ubuhle othanda unodoli weHip isilingo TPE 158CM Mnyama e ...
Ibali le-Cecelia lemvelaphi: UCecelia unodoli wesondo we-TPE ubude be-158cm. Inkwenkwe encinci entloko ibeka i-leech emlonyeni wedoli yangempela. Xa i-leech yeza kwi-rosy doll yomlomo wesondo, ndothuka, kuba unodoli wesondo akazange axhathise konke konke, wavula umlomo we-apricot kwaye wafunxa ...